Xudeyda, oo 140km (90 meyl) galbeed kaga began magaalada caasimadda ah ee Sanca, waxay ahayd magaalada afaraad ee ugu weyn Yemen iyo xarun dhaqaale oo muhiim ah kahor inta aysan mucaaradku la wareegin dabayaaqadii sanadkii 2014. | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Xudeyda, oo 140km (90 meyl) galbeed kaga began magaalada caasimadda ah ee...
Xudeyda, oo 140km (90 meyl) galbeed kaga began magaalada caasimadda ah ee Sanca, waxay ahayd magaalada afaraad ee ugu weyn Yemen iyo xarun dhaqaale oo muhiim ah kahor inta aysan mucaaradku la wareegin dabayaaqadii sanadkii 2014.
Deked ahaan, waxay sidoo kale halbowle u tahay nolosha bulsho badan oo Yemen ku nool, kuwaas oo gebi ahaanba ku tiirsan cuntada la soo dhoofiyo, shidaalka iyo daawada.
Waxay ka mid tahay meelaha ay mucaaradku xukumaan, balse tan iyo bishii June waxaa ka dhacayay weerarro ay geysanayaan isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo oo taageeraya ciidammada dowladda.
n ka badan 22 milyan oo bulshada Yemen ah ayaa u baahan gargaar, halka siddeed milyan aysan garaneyn halka ay ka heli doonaan cunto.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa aqbalay in dekadda Xudeyda la geeyo koox la socota dhaqan-galka xabbad joojinta.
Xabbad-joojinta ayaa bilaabatay Talaadadii kaddib markii toddobaadkii hore wada hadal ay garwadeen ka ahayd Qaramada Midoobay ay yeesheen dowladda Yemen iyo mucaaradka Xuutiyiinta.
Britain ayaa saxiixday hindisaha QM ee Yemen markii ugu horreysay muddo saddex sano ah.
Kooxda QM ayaa muddo 30 beri ah joogi doona dekeadda Xudeyda si ay ula socdaan doorna uga qaataan dhaqan-galka heshiiska xabbad-joojinta.
Qaraarka ayaa “ugu baaqaya dowladda dowladda Yemen iyo mucaaradka Xuutiyiinta inay oggolaadaan soo dejinta badeecadaha ganacsiga iyo kuwa gargaarka oo ay ku jiraan shidaalka, iyo inay dhinacyadu hubiyaan in dhammaan dekadaha Yemen ay shaqeeyaan.”
Wuxuu sidoo kale qaraarku ka codsanayaa Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres inuu soo gudbiyo soo jeedin dhammaan bishan, kaas oo ku aaddan in koox joogto ula socota xabbad-joojinta la geeyo Xudeyda isla markaana laga daad gureeyo dagaal yahannada.
Weriyaha BBC-da ee Yemen Nada Tawfik ayaa sheegeysa in QM ay rumeysan tahay in nabad ka dhalata dekaddaasi Badda Cas ay naruuro u tahay malaayiinka qof ee macluusha qarka u saran, isla markaana ay soo afjarto dagaalka sokeeye
Mareykanka kuma uusan faraxsaneyn qaraarka uu Ingiriisku saxiixay ee QM wuxuuna Khamiistii la yimid tiisa gaarka ah, taas oo aan lagu sheegin xasaradaha bani`aadannimo ee ka jira dalkaas.
Mareykanka ayaa doonayay sidoo kale inuu Iiraan ku cambaareeyo inay jebisay cunaqabateynta saaran dalka Yemen.
Si loo gaaro xal kama dambeys ah, Ingiriiska ayaa meesha ka saran sida loogu baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo tacaddiyada ka dhacay Yemen, isla markaana la ciqaabo dadkii ka dambeeyay.
Isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee taageeraya dowladda Abdurabbuh Mansour Hadi ayaa fulinayay weerarro cirka ah – waxaana garab siinayay qaar ka mid ah waddamada galbeed oo ay ku jiraan Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska.
Previous articleMaxaad ka ogtahay Shaqooyinka suuqooda uu sii yaraanayo?
Next articleSiyaasiga Wariyaha Ahan jiray Yuusuf garaad oo warbixin ka Qoray xarkada Alshabaab
Hadal hayn ka dhalatay atoore caan ah oo toogtay sawir qaadihii filimka uu duubayay